Turkiga oo Sanadihii dambe siyaasad ahaan. loolan adag la galey Reer Galbeedka iyo Mareykanka | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Turkiga oo Sanadihii dambe siyaasad ahaan. loolan adag la galey Reer Galbeedka...
Turkiga oo Sanadihii dambe siyaasad ahaan. loolan adag la galey Reer Galbeedka iyo Mareykanka
Mareykanka ayaa Soo jeedisey in dowladda Turkiga ay martigeliso kulan heer sare ah oo u dhexeeya wakiillada dowladda Afgaanistaan ​​iyo Taliban toddobaadyada soo socda si loo dhameystiro heshiiska nabadeed, Cavusoglu wuxuu sheegay in Turkigu ku lug lahaa howlaha tan iyo bilowgii.
Waxaan ka mid ahayn dalalkii yaraa ee lagu casuumay xafladan saxiixa, waxaanan ka mid nahay jilayaasha ugu muhiimsan Afghanistan,ayuu yiri.
Toddobaadkii hore, Xoghayaha Arrimaha Dibadda ee Mareykanka Antony Blinken, warqad uu u qoray Madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani, wuxuu ku sheegay,
in Mareykanku damacsan yahay inuu ka codsado UN-ka inay isugu yeerto wasiirada arrimaha dibedda iyo ergooyinka Ruushka, Shiinaha, Pakistan, Iran, India, iyo Mareykanka si looga wada hadlo si kor loogu qaado nabadda Afghanistan.
Cavusoglu ayaa sheegay in Turkiga uu ku kalsoon yahay labada dhinac ee wada hadalada, wuxuuna yidhi: “Daalibaan iyo weftiga wadahadalada labadaba, oo macnaheedu yahay dhinaca dawladda ayaa naga codsaday inay marti galino Wadahadalada Taaliban iyo Xukuumadda.
Wuxuu soo qaatay kulamadii Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu la yeeshay dhiggiisa Afghanistan Ashraf Ghani iyo Abdullah Abdullah, oo ah madaxa Golaha Sare ee Dib-u-heshiisiinta Qaranka Afghanistan.
Cavusoglu wuxuu sheegay inuu sidoo kale Qatar kula kulmay Mullah Abdul Ghani Baradar, oo ah kuxigeenka madaxa Taliban iyo hogaamiyaha wafdigooda sanadkii hore ka dib markii ay heshiis nabadeed la saxiixdeen Mareykanka.
Wuxuu carrabka ku adkeeyay in Turkiga ay sidoo kale magacaabi doonaan ergay gaar ah oo u qaabilsan Afghanistan si ay uga qayb qaataan hawsha.
Cavusoglu wuxuu intaas ku daray in kulanka ka dhacaya caasimada Turkiga ee Ankara uusan bedel u noqon doonin hanaanka Qatar laakiin uu yahay mid lagu taageerayo.
Previous articleWadooyinka Magaalada Muqdisho oo maalintii Labaad Xiran
Next articleGabar jlaa ah oo Reer faransa ah oo si ay cabashdeeda ugu muujiso Madaxda Dalkaasi xalaflad Baalmarin lagu bixineyey Dharka isaga dhigtey sabb?
Wararka ka imaanaya magaalada Galkacyo dhinaca Puntland ayaa sheegaya in halkaas lagu Xukumay Rag ka tirsan alshabaab oo halkaas ka geestay Dilal qorshaysan. Maxkamadda...
Dowladda Soomaaliya oo Kenya ugu baaqday in ay furto Safaaradeeda Soomaaliya...